Iindlela ezifanelekileyo zokuphatha imivimbo phantsi kwamehlo.
Hayi, imivimbo ayiyiyo impawu yenkalipho kwaye ayiyikuvusa inhlonipho kwabanye. Ngokuphambene noko, kukho ukutshatyalaliswa okubangela ukuba izibhamu kunye neentlobo zibangelwa ngabantu abangenakuqhelaniswa kunye nabangquzulwano. Kwaye ukuze ungaziwa ngokuba "ubuhle" njengobuntu obungasebenzi, kufuneka uyilahle ngokukhawuleza. Ngaziphi iindlela ezikhoyo zokunciphisa i-hematomas kwaye zeziphi izixhobo ezifanelekileyo zokususa izibhamu - funda ngezantsi.
IiNtsholongwane zokukhupha phantsi kwamehlo
Ukunyunyuzwa ngumonakalo omncinci ngaphakathi kwesikhumba okanye kwiisisu zomzimba. Kubonakala kwimeko apho kwenzakala ukulimala kunye nokuphuka kwee-capillaries enye okanye ngaphezulu. Ekuqaleni i-hematoma yindawo ebomvu-eluhlaza okomhlaza, emva kweentsuku ezimbalwa zijika zibe luhlaza okwesibhakabhaka. Ekubeni ummandla ojikeleze amehlo unobumba obuqilileyo, obunqabileyo, ukubonakala kwemivimbo ekhoyo kule ndawo inokukhubazeka kakhulu.
Yaye ukuba le ndawo inokulimala kakhulu, sincomela ngokukhawuleza ukubamba iqatha elibandayo okanye i-ice pack kule ndawo. Inyaniso yokuba ibanda liyakwazi ukunciphisa iinqanawa, ngokunjalo ukuthintela ukusasazeka kwegazi ngaphantsi kwesikhumba. Ukongezelela, i-lotions ezibandayo zenza umphumo omncinci.
Ukuba ukuxinwa okunjalo akusekho, siya kukucebisa ukuba usebenzise nayiphi na into yentsimbi (ngaphandle kwe-aluminium). Umzekelo, inokuba yimali enkulu okanye i-spoon. Akuvunyelwanga ukunyanzela nokutshintsha iindawo ezichaphazelekayo ngononophelo, sebenzisa ukushisa kubo - ukunyunja kuya kuba mkhulu. Kwakhona, ungasebenzisi ukhilimu osondezayo ukucoca i-bruise, kuba kuya kubakho ukuvuvukala.
Iindlela ezifanelekileyo zokubetha phantsi kwamehlo
Ukuze inxeba isombulule ngokukhawuleza, kuyimfuneko ukusebenzisa izixhobo ezincedisayo eziza kunceda ukubuyisela izitya kunye nezicubu.
Ukuba sithetha ngamachiza enkcubeko, ngoko kukho iindlela ezintle ezintle zokusombulula ngokukhawuleza le ngxaki.
Iiluncedo kakhulu imihla ngemihla yezambatho ezinambini. Basebenzise ngobuso obucocekileyo, gcina iifatate zilahlekelwe yiphunga layo.
Ubunono obuhle bokuphatha ukuvuvukala kunye neenxeba unomthi weklabishi, ogqwetshiwe ngobusi. Oku kufuneka kwenziwe emva kokuvuka kwaye ngaphambi kokulala.
Ukususela ebuntwaneni sisazi malunga neemveliso zonyango ze-plantain. Khumbula, ngokuqinisekileyo, wafaka la maqabunga kwilonda lakho. Kwaye, i-plantain ibuyisela ngokugqibeleleyo iinqanawa, nangona kunyango lwe-hematomas kungcono ukuba ungasebenzisi iqabunga lonke, kodwa ukwenza u-mush kuqala.
I-Aloe inokukunceda ekupheliseni le ngxaki. Ukwakhiwa kokuphilisa kwesi sityalo kunako ukwenza imisebenzi emangalisayo ngesikhumba sethu. Ukunyangwa kwemivimbo, kwanele ukucoca indawo echaphazelekayo ngejusi ye-alo kuphela imihla ngemihla.
Ukuba awuyena umtsalane wamachiza omntu, ngoko unako ukuhamba ngokuphepha kwi-pharmacy uze uthenge apho iTroxevasin, iGeparoid okanye i-heparin. Ezi zi yobisi zibonakaliswa ngokunyanga kwiinkonzo ezenzakaliswe, kwaye ngaphandle kokuba ungathenga ngexabiso elithengi kakhulu. Sicinga ukuba, phakathi kwesi sihlomelo uza kukhetha ukulungelelanisa ukulungiswa kwemivimbo phantsi kwamehlo. Zama ukunyamekela le ndawo ngokuqhelekileyo, kwaye isikhumba sakho siza kubuyela kwifom yangaphambili.
Indlela yokurhoxisa ama-pores edibeneyo ebusweni
I-SesDerma entsha ye-C-Vit for skin shiny
Iimvumi zobuGcoba beMantombazana
Iresiphi edibeneyo: ipayi yamatope kunye ne-meringue
Iimali eziphezulu ze-3 zokwenza i-daytime ezingaphezulu kwama-ruble ayi-1000
U-Ksenia Borodin no-Kurban Omarov bagxekwa ngenxa yerhasi